A320, Mega မိသားစုအထုပ် - A321 တံခါးများဖွင့်လှစ်သည်မဟုတ်လော
A320, Mega မိသားစုအထုပ် - A321 တံခါးများဖွင့်လှစ်သည်မဟုတ်လော2နှစ်ပေါင်း2months ago #1092
သည်အခြားလေယာဉ် A321 မှလွဲ. အထုပ်ထဲမှာဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, ကိုယ့်ကိုသာအဓိကတံခါးကိုဖွင့်နိုင်, ဒီအဲဒီမှာပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်သနည်း
A320, Mega မိသားစုအထုပ် - A321 တံခါးများဖွင့်လှစ်သည်မဟုတ်လော2နှစ်ပေါင်း2months ago #1094
မင်္ဂလာပါ၊ ပုံမှန် A321 မှ [EXITS] အပိုင်းကိုကူးယူပြီး Mega packs ရှိ A321 ရှိထိုအပိုင်းကိုအစားထိုးပါ။ သင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အောက်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောဤအပိုင်းသည် ..just copy and paste ဖြစ်သည်
exit.0 = 0.4, 45.50, -6.0, 7.0,0// တစ်စက္ကန့် openclose rate ရာခိုင်နှုန်း၊ datum (long) မှ longitudinal, lateral, ဒေါင်လိုက်အနေအထား၊ အမျိုးအစား (0 = Main 1 = Cargo2= Emergency)
exit.1 = 0.4, -33.50, 5.85, 0.0, တစ်စက္ကန့် 1 // openclose နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း, datum (ပေ) ကနေ longitudinal, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, ဒေါင်လိုက်ရာထူး, အမျိုးအစား (0 = ပင်မ 1 = Cargo2= အရေးပေါ်)
ထွက်ပေါက် ၂ = ၀.၄၊ ၂၉.၉၀၊ ၆.၀၊ ၁.၀၊ ၂ // တစ်စက္ကန့်လျှင် openclose rate ရာခိုင်နှုန်း၊ datum (foot) မှဒေါင်လိုက်အနေအထား၊ ဒေါင်လိုက်အနေအထား၊ အမျိုးအစား (2 = Main 0.4 = Cargo 29.90 = Emergency)
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် DRCW.
0.175 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်